အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – ၂၀၁ရ အောက်တိုဘာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – ၂၀၁ရ အောက်တိုဘာ
အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – ၂၀၁ရ အောက်တိုဘာ
Posted by kai on Sep 26, 2017 in Editor's Notes, Myanmar Gazette |6comments
“As president of the United States, I will always put America first, just like you, as the leaders of your countries, will always, and should always, put your countries first,” – Trump
စက်တင်ဘာ ၁၉ရက်နေ့က ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာ အမေရိကသမ္မတထရမ့်ပြောလိုက်တဲ့ တိုက်တွန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ လူမျိုး/နိုင်ငံသားနဲ့ တိုင်းပြည်ကို နာမည်ခေါ်မကွဲတဲ့ မြန်မာစာ/စကားနဲ့ရေးတဲ့/ပြောတဲ့ မီဒီယာတွေနဲ့ မြန်မာလူမျိုးတချို့ကတော့ “America” အမေရိက ကို “American” အမေရိကန်လို့သုံးနှုန်းကြဦးမှာပါ။ မြန်မာသတင်းတွေ၊ Facebook မှာရေးတဲ့စာတွေမှာလိုက်ကြည့်ရင် United States of America ကို “အမေရိကန်”ဆိုပြီးကို အတိုချသုံးစွဲနေကြပြီး ဘာသာစာ/စကားတွေကို ကွန်ပြူတာနဲ့အလိုလျှောက် အင်္ဂလိပ်လို ဘာသာပြန်တဲ့အခါ မြန်မာလိုရေးတဲ့ “အမေရိကန်”ကို”American” လို့ပြန်လိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ယူရမယ့်အဓိပ္ပါယ်ကောက် ဘယ်လောက်ထိမှားယွင်းသွားပါမလဲ? အဲလိုဆို သမ္မတထရမ့်ရဲ့ ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပါယ်ကနေ ဘယ်လောက်ထိလွဲချော်သွားနိုင်ပါမလဲ?
ဒီအသုံးမှားဟာဖြင့် မြန်မာအစိုးရတရားဝင်သုံးစွဲနေတဲ့ “အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု”ကနေ ဖြတ်တောက်ခေါ်တာဖြစ်နိုင်ပြီး BBC, VOA အစိုးရမီဒီယာတွေက နိုင်ငံရေးပေါ်လစီတွေအရ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ ခေါ်နေတာကနေ လူတချို့နှုတ်ကျိုး/စာကျိုးသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဆိုတော့.. မြန်မာ-အမေရိကန်တယောက်အနေနဲ့ အင်္ဂလိပ်လို “America” ကို “အမေရိက”၊ “American” ကို “အမေရိကန်”လို့သာ တိုက်ရိုက်အသံဖလှယ်ပြီး သုံးကြစေလိုကြောင်း တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။ မြန်မာမှုပြုခေါ်ချင်ရင် စကားလုံးအသစ်ထွင်ကြပါလို့။
လူမျိုး/နိုင်ငံသားနဲ့.. တိုင်းပြည်အမည်တွေကို ပေါ့ပေါ့ဆဆခေါ်ပြောရေးနေကြတာကဖြင့် အရေးမကြီးဘူးထင်ရပေမယ့် မြန်မာပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေး၊စီးပွားရေး၊လူမှုရေးတွေလှုပ်ခါသွားပါကြောင်း ဆက်ရေးမှာပါ။
Burma နဲ့. Myanmar ( ဘားမား – ဗမာ နဲ့ မြန်မာ)
Bengali နဲ့ Rohingha (ဘင်္ဂလီ နဲ့ ရိုဟင်ဂျာ)
Islam နဲ့ Muslim (အစ္စလမ် နဲ့ မွတ်စလင်)
Chinese နဲ့ Tatar Yoke ( ချိုင်းနိစ်း နဲ့ တရုတ်)
Indian နဲ့ Kalar (အိနိ္ဒယသား နဲ့ ကုလား )
စတဲ့စာသား စကားအသုံးများမှာ ပြဿနာဘယ်လောက်ကြီးနေတယ်၊ ကြီးလာမယ်ဆိုတာ တွေးကြည့် သိမှာပါ။
၁၉၈၈ စက်တင်ဘာ ၁၈ရက်စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီး တိုင်းပြည်အမည်ကို Burma ကနေ Myanmar လို့ထ,ပြင်ရာမှာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေ နာမယ်အသစ်မှာထွေပြားဝေဝါးဖူးပါတယ်။ NLD အပါအဝင် ကျောင်းသားများနဲ့ အုံကြွသူများဟာ Burma အမည်ကို မလျှော့တန်းထားခဲ့သလိုအမေရိကပြည်ထောင်စုရဲ့ အစိုးရအဆက်ဆက်ဟာလည်း Burma အမည်ကိုသာ ဆုပ်ကိုင်ပေးထားခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁ဝ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကျယ်ချုပ်ကလွတ်လာပြီးနောက်ပိုင်း သူမကိုယ်တိုင်က စ,ပြင်ခဲ့လို့ အခုတော့ Myanmar အသုံးအနှုန်းကို အားလုံးလိုလိုသုံးနေကြရပါပြီ။ မြန်မာပြည်ကိုသမ္မတအိုဘားမားအလည်အပတ်လာတုံးကလည်း Myanmar လို့သတိထားပြီး သုံးနှုန်းပေးခဲ့ရပါတယ်။ မြန်မာလား၊ ဗမာလား၊ မြန်မာဟာ ဗမာနဲ့အတူတူလား?
အခုအချိန်မတော့ ကမ္ဘာ့၁၉၅နိုင်ငံမှာ မြန်မာတနိုင်ငံတည်းကသာ လူမျိုးနဲ့တိုင်းပြည်အမည်ကို အင်္ဂလိပ်လိုရေးရင် တူတူချထားတဲ့ တိုင်းပြည် Myanmar ၊ လူမျိုး Myanmar ပဲဖြစ်လို့နေပါသေးတယ်။ ကိုလိုနီလက်အောက်ခံလည်းမဟုတ်တော့တာမို့ ဘယ်အရှင်သခင်အမည်ပေးတာကိုစောင့်နေမှန်းလည်းမသိ?။ တကမ္ဘာလုံးနဲ့စံမတူ မိမိတို့လုပ်ချင်တာလုပ်ပါတယ်ဆိုလည်း ဖြစ်တာပါပဲ။ သို့သော်ပြဿနာတွေဖြစ်လာမှာကို တားဆီးချင်စိတ်ရှိကြတယ်ဆိုရင် စနစ်ကျတဲ့ ရင့်ကျက်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုရှိတယ်ဆိုရင် လူမျိုး နိုင်ငံအမည်နာမည်တွေလောက်တော့မှန်မှန်ကန်ကန်ခေါ်သင့် မရှိသေးရင်လည်းစနစ်တကျပြုစုတီထွင်သင့်လှပါတယ်။
နောက်တခုကတော့ မြန်မာပြည်တွင်းက ကချင်၊ကယား၊ကရင်၊ချင်း၊မွန်၊ ရခိုင်၊ရှမ်း စတဲ့ ဒေသ(ပြည်နယ်) အမည်တွေကို.. တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုကြီး (ကချင်၊ကယား၊ကရင်၊ချင်း၊မွန်၊ ရခိုင်၊ရှမ်း) နာမည်တွေကောက်ပေးထားကြတာပါ။ အဲ.. ဗမာ၊ မြန်မာကျတော့ ဗမာနိုင်ငံ၊ မြန်မာနိုင်ငံတဲ့။ လူမျိုးအခြေခံတဲ့ ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးလုပ်ချင်တာလား၊ ခွဲခြားပြီး ကွဲပြားမှ အုပ်ချုပ်လို့လွယ်အောင်လားမသေချာ။ သမိုင်းတရားခံဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်းမသိရပေမယ့် ထုံးစံအတိုင်း သွေးခွဲသွေးထိုး ချွန်တွန်းလုပ်ခဲ့ရာမှာ ပါရဂူမြောက် နေမဝင်အင်ပါယာပိုင်ခဲ့သူ အင်္ဂလိပ်တွေပဲဖြစ်မယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။ မှတ်တမ်းတခုမှာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေကို အမည်ပေး အုပ်စုခွဲသန်းခေါင်စာရင်းစကောက်ခဲ့တာ ၁၉၀ဝ နောက်ပိုင်းမှလို့ဖတ်ဖူးလို့ပါ။
ဘာဖြစ်လာပါသလဲ?။ California ပြည်နယ်မှာမွေးဖွားနေထိုင်သူတွေ Californian ဖြစ်ပါတယ်။ Texas မှာနေရင် Texan ခေါ်လို့ရပါတယ်။ Rakhine ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာအမြဲတမ်းနေသူများ Arakanese များဖြစ်ပါသလား၊ ရခိုင်လူမျိုးဖြစ်သွားပါသလား? ရှမ်းပြည်ထဲမှာအမြဲတမ်းနေသူများ၊ ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာ အမြဲတမ်းနေသူများရဲ့ လူနည်းစုအခြားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးအမည်ခေါ်တွေကို တွေး၍ကိုယ်ချင်းစာကြည့်ကြဖို့ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားမှာဆိုရင်လည်း လူမျိုး/ဘာသာဆိုပြီး ဖြည့်ကြရတာမှာစံမရှိရေးချင်တိုင်းရေးနေကြတာ သတိထားသင့်ပြင်သင့်ပါပြီ။ တကယ်တော့ ဒီလိုခေတ်ကြီးမှာ လူမျိုးနဲ့ ကိုးကွယ်ရာဘာသာသာသနာလို သွေးရော၊ ပြောင်းလဲနေနိုင်တာကို အတင်းကြီးဆွဲစေ့ရေးထားတာကိုက ရိုးသားမှုမရှိလို့သာ ဆိုရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။
အခုတလော ကြွလာတဲ့ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ဘင်္ဂလီဖက်ကြည့်ကြရအောင်
သမိုင်းပညာရှင်မဟုတ်သမို့ အဲဒီလူမျိုးအမည်ခေါ်တွေရဲ့ မူလဖြစ်လာပုံကိုသေချာမသိပေမယ့် သေချာပေါက်ပြောနိုင်တာကတော့ မြန်မာပြည်တွင်းက ဗမာအများစုကြီးဟာ ရိုဟင်ဂျာအမည်ခေါ်ကို ကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်ပြီး ဘင်္ဂလီ ဖိခေါ်နေကြပေမယ့် ကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့မေယုဒေသနဲ့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းအပါအဝင် မြန်မာပြည်တပြည်လုံးပြန့်နှံ့နေထိုင်နေကြတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဆိုသူများကတော့ ဘင်္ဂလီလို့အခေါ်မခံလိုကြပါ။ မြန်မာထုံးစံအတိုင်း ပေါ့ပေါ့ခေါ်ခဲ့ကြပေမယ့် အခုနေအခါမှာတော့ ကမ္ဘာတခုလုံးက မျက်စိဒေါက်ထောက်ကြည့်ရတဲ့အခြေရောက်ခဲ့ပါပြီ။ ကမ္ဘာကတော့ ရိုဟင်ဂျာလို့ သိလွယ်အောင် ခြုံသုံးပေးနေပါပြီ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရဟာ ကြားချပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်က မွတ်စလင်များလို့ခေါ်သုံးနှုန်းဖို့ တိုက်တွန်းဖူးပါတယ်။
ဆိုတော့.. စကားအသုံးအနှုန်းကနေ စိစစ်ခွဲဖြာကြည့်ရအောင်..
မွတ်စလင်ဆိုရင် ကမ္ဘာအဝှမ်းက သန်းပေါင်းတထောင့်ရှစ်ရာမကသော အစ္စလမ်သာသနာကိုးကွယ်သူ လူဦးရေကြီးနဲ့ စကားပြောရ၊ ညှိရလုပ်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။
ဘင်္ဂလီဆိုရင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြည်နဲ့ အိနိ္ဒယ၊ ပါကစ္စတန်ပြည်တို့မှာနေကြတဲ့ ဘင်္ဂလီလူမျိုးသန်း ၃၀ဝ နဲ့ ငြိမှာပါ။
ရိုဟင်ဂျာဆိုရင်တော့ ၁သန်းဝန်းကျင် ရှိတဲ့ လူဦးရေနဲ့ Deal ကြရမှာပါ။
စကားအသုံးနဲ့ ရွေးချယ်မှုကနေ ပြဿနာတွေကို ဘယ်လောက်လျှော့ချ လျော့ကျသွားနိုင်သလည်းသိနိုင်တဲ့ အဖြစ်တခုပါ။
တကယ့်အချက်အလက်နဲ့ ထုတ်ယူစစ်ဆေးလို့လည်း ရပါတယ်။
ဒီလို မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ သိပ္ပံနည်းပညာခေတ်ကြီးမှာ လူတဦးချင်းစီရဲ့ DNA ကနေ မိခင်ဖခင်အမျိုးတွေကို အတိအကျဆက်စပ်ခွဲနိုင်သလို လူမျိုးတူရာ အုပ်စုတွေလည်းခွဲထုတ်နိုင်တာပါ။ ဤသူကိုယ်တိုင်လည်း စစ်ဆေးဖူးပါတယ်။ ရာခိုင်နှုန်း၁ အထိခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်တဲ့ မျိုးရိုးဗီဇ အင်ဂျင်နီယာ နည်းပညာကိုအားကိုးလို့ရပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြည်မြို့တော် ဒက္ကာလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ ဘင်္ဂလီလူမျိုးစစ်စစ်ဆိုသူ ၁ဝယောက်ရဲ့ ဗီဇနဲ့ မေယုဒေသမှာရှိတဲ့ ရွာတခုချင်းစီက ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးခေါင်းဆောင် ၁ဝယောက်ရဲ့ ဗီဇကိုပဲစစ်စစ်။ ရခိုင်၊ ကမာန်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ မျိုးရိုးဗီဇကိုပဲဒေသခွဲပြီးကောက်ယူမှတ်တမ်းတင်တင် ဒီပြဿနာဟာ အလုံးစုံမပြေလည်တောင် အတိုင်းအတာတခုထိငြိမ်ဝပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်။
အဲဒီကနေမှ မျိုးရိုးဗီဇ ၅၀%နှင့်အထက်တူခဲ့သော်၊ မတူခဲ့သော်ကနေ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ဆုံးဖြတ်ကြရမှာပါ။
မြန်မာ့တပ်မတော်လို့ခေါ်တဲ့ စစ်တပ်ဟာ စစ်ဖြစ်ဖို့ကြေညာပြီ ဝင်လာပြီဆိုရင်တော့ လက်နှေးဟန်မရှိပါ။ ဒါကို ၁၉၈၈ အရေးတော်ပုံမှာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ခဲ့ကြပြီးပါပြီ။ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာပြီးတာနဲ့ ကန့်ကွက်ပိတ်စို့ကြသူတွေကို ရန်ကုန်၊မန္တလေးမြို့ကြီးတွေရဲ့ လမ်းတွေပေါ်မှာတင် ဘယ်လိုပစ်ခတ်နှိမ်နင်းခဲ့တယ်။
လူထုကြီးရဲ့ ၅၀%အထက်အုံကြွမှုမှာ သန်းဂဏန်းမက မြန်မာလူမျိုးတွေကို ဘယ်လိုလမ်းကြောင်းတွေ”ဟ”ပေးပြီး နယ်စပ်ဒေသတွေရောက်အောင် အဲဒီကမှ ပြည်ပရောက်အောင် တွန်းထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ အဲဒီနဝတ၊နအဖခေတ်အချိန်တွေကထွက်ခဲ့ကြရတဲ့ ပြည်ပရောက်မြန်မာတဦးချင်းစီက သက်သေပါ။
အဲဒီမဟာမြန်မာရွေ့ပြောင်းမှုကြီးမှာ လူတွေသန်းချီ ထွက်ကြရပါတယ်။ ကချင်၊ကယား၊ကရင်၊ချင်း စတဲ့တိုင်းရင်းသား ၁၃၅မျိုးလို့ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးစောမောင် ထွင်ဆိုတဲ့ သူတိုင်း(တိုင်း) ထွက်ပြေးရသူတွေထဲပါဖူးပါတယ်။
စစ်ဖြစ်ပြီဟေ့ဆိုရင် စစ်တပ်ဆိုတာ စစ်လုပ်ထုံးတွေအတိုင်းသွားပါတယ်။ သွားရပါတယ်။
မြန်မာတပ်မတော်နဲ့ ကရင်၊မွန်တွေနဲ့ ဖြစ်တဲ့ စစ်တွေကြောင့် အခုထိ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်မှာ စစ်ပြေးပြောင်းခိုသူ သိန်းချီကျန်နေပါသေးတယ်။ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ သူတို့ပြန်မလာနိုင်သေးပါ။
ဒီလိုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်ဟာ အခု ရိုဟင်ဂျာအရေးမှာ ရွာတွေမီးရှို့ပြီး လူ၄သိန်းမက ကို တဖက်နိုင်ငံကို တွန်းထုတ်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုတာ သူ့ကိုယ်ပိုင် စစ်တို့ရဲ့ မဟာဗျူဟာပါ။
ဒါကို မြန်မာအစိုးရကနေ မွတ်စလင်လို့ တရားဝင်တပ်လိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်ကြောင့်သာ ကမ္ဘာ့အစ္စလမ်သာသနာဝင်တွေနဲ့ ငြိစွန်းရပြီး အခုလို လှုပ်ခတ်သွားတယ်လို့ သုံးသပ်မိပါတယ်။
ဆိုတော..့ မြန်မာပြည်တော့ ကိုယ်ကျိုးနည်းပါပေါ့တွေးကြမှာပါလား?
ဤသူရဲ့ အမြင်အရကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်၃ဝအတွင်းစစ်အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်ရေးကာလတွေမှာ တကမ္ဘာလုံးပွက်လောရိုက်အောင် ပိတ်စို့တာဆီးလည်း ကုလသမဂ္ဂက လုံခြုံရေးကောင်စီက အကြိမ်ကြိမ်ရှုံ ့ချအရေးယူလည်း ဂရုမစိုက်ခဲ့တဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ဖြစ်ပါကြောင်းလို့ပါပဲ။
ဖိအားများများလှပါရင် သူ့မူလအနှစ်၃ဝဘဝကို အသာလေးပြန်ရွှေ့လိုက်ဖို့ ဝန်လေးမှာမဟုတ်ပါကြောင်းရယ်လို့ပါပဲ။ လက်မည်းကြီးအုပ်စုက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကမ္ဘာအပေါ်ဩဇာရှိမှုတွေကို ပွန်းပဲ့သွားအောင်နဲ့ သူမ,ခေါင်းဆောင်ပြီး အခုမြန်မာပြည်လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကနေယိမ်းယိုင်ချိနဲ့သွားအောင် ဒီယုန်မြင်လို့ ဒီခြုံထွင်သူများမို့ ကမ္ဘာ့ဖိအားကိုဂရုရယ်မှ စိုက်မည်မဟုတ်ကြောင်းနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပုံရိပ်ကျသလောက် လက်ခမောင်းခတ်မည့်သဘောပါလို့။
ရိုဟင်ဂျာခေါ်စေချင်တယ်ဆို သူ့လူမျိုးနာမည် သူပေးချင်သလိုပေးခွင့်ရှိတာမို့ ပေးစေပါသတည်းပေ့ါ။ ရိုဟင်ဂျာအမည်ဟာ ရှေးရှေးက တခြားလူမျိုးတပါးကအသုံးပြုခဲ့ဖူးတဲ့ အငြင်းပွားစရာ စာသားစကားဆိုရင်တောင် ယနေ့ခေတ်မှာ တိုက်ရိုက်ထိခိုက်စရာလူမျိုးထင်ရှားမရှိတော့သမို့ ဖြစ်စေသတည်းပါပဲ။ ဒေသနယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ လူမျိုးအမည်ပေးတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားတာ မရှိတာမို့ ပိုတောင်ကောင်းလှသေးရယ်ပါ။
မျိုးရိုးဗီဇ စစ်ဆေးလို့ ဘင်္ဂလီတွေနဲ့ ၇၅%အထက် လာတူနေရင်တော့ အချက်အလက်အရ ထောက်ပြပြီး မြန်မာပြည်တွင်း မိဘဘိုးဘွားနေထိုင်ခဲ့တဲ အထောက်အထားပြနိုင်ရင် နိုင်ငံသားပေးခြင်းနဲ့အတူ တဖက်ဘင်္ဂလီများနဲ့ကွဲပြားအောင် ရိုဟင်ဂျာလို့ပေးလို့ရနိုင်ကောင်းပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်နေသော ဘင်္ဂလီများကို ရိုဟင်ဂျာဟုခေါ်သည်ပါပေါ့။ ဒါဆို ပဋိပက္ခတွေဖြေရှင်းရာမှာ တော်တော်ချုံ့မိ လွယ်ကူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ အမည်တော့ မပေးသင့်ပါ။
မြန်မာပြည်ရဲ့ ၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဥပဒေအရ တိုင်းရင်းသားနဲ့ နိုင်ငံသား ဟာ အမည်နာမသာကွဲပြီး အခွင့်အရေးအကုန်တူတူဖြစ်ပါသတဲ့။ ဒါကို အဲဒီဥပဒေရဲ့ ဖန်တီးရှင် ဦးနေဝင်းစကားကို ကိုးကားကြည့်သိနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုအဆင်ပြေမယ့်အဖြေကို မြန်မာတပ်မတော်ကထုတ်ချင် ပြေလည်ချင်ပါ့မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတော့ရှိပါတယ်။
အမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်ကို ပုံဖေါ်မွေးထားပြီး အင်အားလည်းကောင်းလာနေတဲ့လူဦးရေကို ထိမ်းကိုင်ထားနိုင်တဲ့ တပ်မတော်ရဲ့ကျောထောက်နောက်ခံရ လက်ရှိအစိုးရရဲ့အတိုက်အခံပါတီဟာ နောက်ဆုတ်မယ်မထင်ပါ။ အခုရိုဟင်ဂျာပဋိပက္ခမှာ သူတို့လိုချင်တဲ့အရာများစွာ မိုးပေါ်ကကျသွားဟန်မြင်ရပါတယ်။
မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ ရှေးအစဉ်အဆက် စစ်တိုက်တာဝါသနာဗီဇထုံပြီး ရှေးရှေးနှစ်ထောင်ချီက မြောက်ဖက်ဒေသတွေကနေ မြန်မာပြည်ထဲအခြေချလာခဲ့တာလို့ သမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာသန်းထွန်းကရေးပါတယ်။
ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်လို့ဆိုတဲ့ ပုဂံအင်ပါယာခေတ် ခရစ်၁၀၄၄နှစ် ကစလို့ အခုထိ စစ်တခြိမ်းခြိမ်းချနေတဲ့ လူမျိုးဇာတိနွယ်တွေပါ။ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုထဲတောင်အခြေကျလို့ ဒီလေဒီမြေဒီရေကို မှီတင်းသူများလည်း ဘယ်ဘာသာ၊သာသနာဝင်ကြတယ်မဆို တခြိမ်းခြိမ်းကို ကြိုက်ကြဟန်တူပါတယ်။
“သေလိုက်” “သတ်လိုက်” “ခေါင်းဖြတ်လိုက်” “မီးရှို့လိုက်” “အသက်ချင်းထပ်လောင်းမလား” စသဖြင့် အသက်နဲ့ရင်းတဲ့စကားတွေလည်း နေ့စဉ်သုံးစကားတွေထဲထည့် လွယ်လွယ်ပြောကြရေးကြသူတွေပါ။ မြန်မာလူမျိုးဟာ ၂ယောက်ပေါင်းအတူအလုပ်လုပ်လို့မရတဲ့သဘောကိုလည်း သိကြဖို့လိုပါတယ်။ ကောက်ရိုးမီးလို ဝုန်းတဲ့စိတ်ရှိတာလည်း သိသင့်ပါတယ်။
တကယ်တော့ လူအဦးစီတိုင်းမှာလည်း တယောက်ထဲ ၃ကိုယ်ခွဲထားကြပြီး ယခုဘဝကံဆိုးတာဟာ ပြီးခဲ့တဲ့”အတိတ်ဘဝကကိုယ်”အသုံးမကျမှုကြောင့်။ ဒါ့အပြင်”နောင်ဘဝကလူ”ကောင်းဖို့ရည်ရွယ်ပြီး “လက်ရှိဘဝကသူ”က လှူတန်းပေးဆပ်တာတွေလုပ်ကြတဲ့လူမျိုးပါ။
ဒီလိုဘာသာရေးအတွေးအခေါ်ကို အမြုတေကျနေတဲ့ မြန်မာတွေဟာ စစ်ကိုချစ်တဲ့ဗီဇလည်းပါသမို့ အိမ်နီးချင်း ထိုင်း၊ ချိုင်းနား၊ အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အပါအဝင် စိတ်သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်သူ မည်သူကိုမဆို ထိပ်တိုက်ရန်ဖြစ် စစ်ခင်းဖို့လည်း ဝန်မလေးသူများပါပေါ့။
“ပဋိပက္ခ၏ အနုပညာ”မြောက်စွာနဲ့.. ရန်ဖြစ် စစ်တိုက် ပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာကိုသာ ရှာကြံဖေါ်ထုတ် ချစ်ခင်စုံမက်ကြတဲ့ Tibeto-Burman မျိုးနွယ်စုဝင်ကြီးများပီပီ ဆက်၍..ဆက်၍… ရန်ဖြစ်ခဲ့.. ဖြစ်နေ.. ဖြစ်ဦးလတ္တံ ့..။
မည်သို့သော ခေတ်အချိန်ခါတွင် တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးနှင့် လူထုကောင်းစားရေး လူနေမှုဘဝမြင့်မားရေးတို့လုပ်နိုင်ကြပါမည်နည်း။ အဖြေကားမရှိ၊ ကြာလေဝေးလေတည်း။
ဤအတိုင်းဆက်ကြပါလျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွန်ကာလများသို့ရောက်သော် မှုန်၍ပင်ပျောက်သွားမည်ထင်ပါ၏။ ။
အီရပ်ကွီ-ကဒ်လူမျိုးတွေက.. ကဒ်ဒစ်စတန်ပြည် မဲခွဲပြီး တောင်းတာကိုး..။
မြန်မာပြည်ထဲက.. တရုတ်လို့မြန်မာတွေခေါ်တဲ့သူတွေက.. တရုတ်ပြည်နဲ့ ပေါင်းချင်ပါတယ်ဆိုပြီး မဲခွဲရင်.. ဗမာတွေ.. ဘာလုပ်မလဲ.. သိချင်သားဟေ့.. သိချင်သား..။
Updated 5:15 PM ET, Mon September 25, 201
Updated 5:15 PM ET, Mon September 25, 2017
Iraqi Kurds casting votes on independence 02:35
Irbil, Iraq (CNN)Iraqi Kurds cast ballots inacontroversial independence referendum Monday as tensions between Iraq’s largest ethnic minority and the Iraqi government in Baghdad intensified.
Voting got underway at 8 a.m. (1 a.m. ET) and ended at7p.m. (12 p.m. ET). The first results should be known within 72 hours.
The Kurdistan Regional Government, which administersasemi-autonomous region in northern Iraq, says the referendum will give itamandate to achieve independence from Iraq.
ဒါကို မြန်မာအစိုးရကနေ မွတ်စလင်လို့ တရားဝင်တပ်လိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်ကြောင့်သာ ကမ္ဘာ့အစ္စလမ်သာသနာဝင်တွေနဲ့ ငြိစွန်းရပြီး အခုလို လှုပ်ခတ်သွားတယ်လို့ သုံးသပ်မိ….
အဟမ်း…. မြန်မာစစ်တပ် ေ-ာက်ကျင့်လေ..။
အခုကမှ.. အရပ်သားအစိုးရဆီ စစ်ဆင်ရေးနယ်မြေတောင်းပြီးလုပ်တာမို့.. တော်ပါသေးတယ်..။
.. စစ်တပ်က စစ်သဘောအတိုင်းလုပ်မှာပေါ့.။ အမေရိကားဆိုရင်လည်း..စစ်ဖြစ်ပြီဆို.. မွစာကြဲအောင် ဗုံးကြဲပြီးမှ.. မြေပြင်တပ်ဝင်လာတာပဲ..။ မကောင်းသူထိပ်ကောင်းသူထိပ်..။
ယုတ်ယုတ် ယုတ်ယုတ် မလုပ်နဲ ့
လှုပ်လှုပ် လှုပ်လှုပ် ဖြစ်တာနဲ့မာမူခိုင်ကို အရင် ဖြုတ်မှာ
ဗြုတ်ခနဲ့ဗြုတ်ခနဲ့နေအောင် နှုတ်ခမ်းမွေးတွေ တစ်ပင်ချင်း ဆွဲဖြုတ်ပစ်မှာ
တားတဲ့ကောင်တွေလဲ တစ်စိချင်း ဆွဲညှစ်ပစ်မယ် လည်ဇိကို
လာမလုပ်နဲ့သွေးကတော့ အေးပြီသား ရေဂဲတိုက်မှာ အလောင်းပြင်တာ
တက်မလာနဲ့အကုန်ဖြတ်ရိုက်ပလိုက်မယ် ပလာတာတွေပြောတာဘာ
သကြား အချပ် ၅ဝ အော်ဒါရှိတယ်
၄ နာရီ အမီပို ့ရမှာ
ဘုန်းကြီး ရဟန်း သာသနာ့ဝန်ထမ်း ကလည်း သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရေးအမြင်အတိုင်း ၊ စစ်သားကလည်း စစ်ရေးအမြင်အတိုင်း လုပ်ကြမှာပဲ ။ နိုင်ငံရေးသမားကတော့ သာတဲ့အမြင်ကတွက်မယ် ၊ ဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်ပြောဖို့မလွယ် …
ကျူးဘားအရေးအခင်းမှာ သမ္မတကနေဒီ မိန့်ခွန်းအဆုံးသတ်လေး ကောက်နုတ်လို …
“Our goal is not the victory of might but the vindication of right-not peace at the expense of freedom, but both peace and freedom, here in this Hemisphere and, we hope, around the world.”
မြန်တျန့်တွေ စစ်ကိုချစ်တာတော့ မပြောနဲ့ … သမိုင်းအစဉ်အဆက် အားကောင်းလာပြီဆို အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကို စစ်ချီပြီး ဓားပြတိုက်တာချည်း … ။ တဘက်က တွေးပြန်ရင်လည်း အဲသည့်လိုသာ မ “စွာ” ခဲ့ရင် … မွန်-ခမာ ၊ စိန ၊ အိန္ဒိယတွေကြား ဘုံပျောက်ခဲ့တာ ကြာပေါ့ …